नेपालको अस्मितामाथि हमला, हामी रमिते !
नेपालमा सम्वैधानिक राजतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ– टोनी हेगन ! नेपालमा सारा बिकाउ नेताहरु हिमवतखण्ड–नेपालको हिन्दु तथा बौद्धभूमिको सार्वभौमसत्ता विदेशीहरुलाई बुझाएर विश्वको एकमात्र हिन्दुअधिराज्यमा इसाईकरण गर्न लागिपरेका छन् । नेपालको सार्वभौमसत्ता र यसको स्थायित्वको लागि राजसंस्था र हिन्दुअधिराज्य नैं यहाँको आधार स्तम्भ हो । यसलाई कायम राख्न हामी सम्पूर्ण नेपालीको समर्पण चाहिन्छ ।
नेपालमा हिन्दु तथा बौद्ध अस्मिता समाप्त पार्न विक्रम संवत् १४०० तिर बंगालका नबाब सम्सुद्दीनको नेतृत्वमा ३० हजार मुसलमान पल्टनले आक्रमण गरेको बेलादेखि अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन । उसबेलामा उनीहरु लुम्बिनीको बुद्ध जन्मस्थलमा आक्रमण गर्दै, जनकपुरहुँदै पनौतीबाट पशुपतिनाथ माथि आक्रमण गर्न आएका थिए । यसरी मुसलमानको विभत्स आक्रमण समाप्त गर्न जयस्थिति मल्लको नेतृत्वमा तनहँु, लम्जुङ्ग, कास्कीका हिन्दुराजाहरुको सहयोगका फौजको आक्रमणबाट २४ हजार मुसलमान फौज मारिए र छ सय भागेका थिए । सो बाहेक नेपालमा मुसलमानहरुले आक्रमण गरेको इतिहास छैन ।
२०६३ जेष्ठ ४ गते जवरजस्ती रुपमा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा नेपाललाई घोषणा गरिएको बेलादेखि क्रिस्चियनहरु पैसाको खोलो बगाउँदै धर्मपरिवर्तन गराउन नेपालका गाउँगाउँमा छिरेका छन् । भनिन्छ– माओवादीभित्र पनि धेरै क्रिस्चियन छन् । पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई क्रिस्चियन हुन् भन्ने कुरा धेरैले लेखेका छन् । कृष्णबहादुर महरा पनि क्रिस्चियन हुन् भनी भनिन्छ । उनीहरु लुकीलुकी चर्च जान्छन्, धर्मनिरपेक्ष गराउन उनीहरुको पनि ठूलो हात छ ।
पहिला तिनै पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईहरु मघेशीहरुको विरोध गर्थे । भारतीय गुप्तचरका आलोक जोशीको राहवरमा २०६८ भदौं ११ गते चार बुँदेमा दाहाललाई हस्ताक्षर गर्न लगाएर प्रधानमन्त्री बनेका बाबुराम भट्टराईले एक मधेश एक प्रदेश जस्तो राष्ट्रघाती बुँदा र १० हजार मधेशी युवा नेपाली सेनामा भर्ना गर्न, भारतीय प्रशासनिक संयन्त्र र गुप्तचर संस्थाले उचालेका मधेशीहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।
नेपालको पहिचान ध्वस्त गराउने एक कुलंगार व्यक्तिको रुपमा बाबुराम भट्टराई चिनिएका छन् । यो देश बिगार्नमा बाबुराम भट्टराई र पुष्पकमल दाहालबाट जे जस्ता अपराधहरु भएका छन्, त्यसबाट उनीहरु उम्कन सक्ने स्थिति छैन । दाहालले केही बर्ष अगाडि खुला मञ्चमा क्रिस्चियनको आयोजनामा भएको सभामा ‘धर्मनिरपेक्षको विरोध गर्नेलाई अपहरण गरिने छ’ भनेर बोले । यसरी नेपाली इसाईहरु धर्म परिवर्तन गर्दै हिन्दुहरुको विरुद्ध खनिन्छन् ।
क्रिस्चियनले पैसाको बलमा अफ्रिका र अरबभित्र पसेर कैयौं देशको विखण्डन र लुट मच्चाउँदै आए । दक्षिण सुडानमा क्रिस्चियनकरण गराएर सुडान फुटाएर छाडे । जहाँ क्रिस्चियनकरण गर्न खोजिएको छ त्यहाँ कही शान्ति छैन । पश्चिमी देशका मानिसहरु मानव अधिकारको नारा दिन्छन् तर क्रिस्चियन धर्मको समर्थन नगर्नेहरु मारिन्छन् काटिन्छन् । संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकारले पनि यस्तै बदनामी कमाएको छ । कुनै मुसलमान वा हिन्दु वा बुद्धिष्ट मारियो भने त्यहाँ मानव अधिकारको कुरा नैं उठ्दैन तर कुनै क्रिस्चियन् मारियो वा चर्च भत्कियो भने त्यस्ता कथित मानव अधिकारवादी हाहाकार मच्चाउछन्, कराउँछन् । कस्तो हेपाहा कुरा ? त्यसैले हामी पनि क्रिस्चियनहरु र त्यस्ता मानव अधिकारवादीहरुको घृणा गछौं–भ्रत्सना गर्छौं ।
अहिले दक्षिणपूर्व एशियालाई क्रिस्चियनकरण गर्नमा पश्चिमी देशहरु नैं खनिएका छन् । हामी नेपालबाट क्रिस्चियनहरुलाई सकारात्मक बाटो लिएर नेपालको पहिचान विरुद्ध लागेर बदनाम हुने काम नगर भन्छौं । नेपालको सन्दर्भमा जति मानव अधिकारवादीहरु छन् ती सबै पैसाको लागि देशै बेच्न लागिपर्छन् । जसले पैसा दियो त्यसैका पक्षमा बोल्ने खाओवादीहरु मानव अधिकारवादी बनेका छन् । सभामुख बनिसकेका दमननाथ ढुङ्गाना जस्ता वरिष्ट अधिवक्ता इसाई संस्थाको तर्फबाट महिनाको दुई लाख खान्छन् भने अरुहरु त्यस्ता कति छन् कति । राज्यले यस्ता अपराधीहरु पत्ता लगाएर कारबाही गर्नसक्नु पर्छ ।
नेपालमा राजसंस्थाको आडमा हिन्दुअधिराज्यले विश्वभरमा आप्mनो पहिचान देखाउन सकेको थियो । सबैमा सुरक्षाको राम्रो व्यवस्था थियो । देशभित्र यस्तो खतरनाक अवस्था आएको थिएन तर २०६३ सालपछि कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को कुशासनबाट जन्मिएको माओवादीलाई भारतीय संयन्त्रले आफ्नो पकडमा लिएर उनीहरुबाटै नेपाललाई आतंकित बनाएर कब्जा गर्ने रणनीति लियो । त्यसैको परिणति राजाबाट प्रधानमन्त्री नपाएर आक्रोशित भएका कांग्रेसका गिरिजाप्रसाद र एमालेका माधवकुमार नेपाल जस्ता गद्दारहरु समेतलाई अनेकौं आश्वासन देखाएर माओवादी समेतको सहमतिमा २०६२ साल मंसिरमा १२ बुँदे सहमति गरायो । २०६२ सालपछि १२ बुँदे सहमतिपछि भारतीय गुप्तचर संस्थाले माओवादीलाई पनि आफ्नो घोडा बनायो ।
त्यसैलाई आधार बनाएर नेपालको अवस्था संकटग्रस्त बनेको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो शत्रु इसाईहरु नैं हुन् । क्रिस्चियनहरु हिन्दुस्थलको जग भत्काउन लागिपरेका छन् । हामी नेपाली क्रिस्चियन धर्मको विरोधी थिएनौं र होइनौं पनि । पहिला जे जस्तो भएता पनि २००७ सालपछि क्रिस्चियनहरु नेपालमा छिटपुट पसे पनि कुनै विरोध गरेका थिएनौं । २०४६ सालपछि केही मात्रमा खुलेर धर्म परिवर्तन गराउन लागेका थिए तर २०६३ सालको आन्दोलनपछि त हद भयो । २०६३ सालको आन्दोलनको अघि–अघि तोडफोड गर्दै उघ्र नारा लगाउनेहरु योजनाबद्ध रुपमा आन्दोलनकारीको अघि अघि हिड्ने सबै क्रिस्चियनहरु थिए ।
पृथ्वीनारायण शाहका शालिक भत्काउने सबै क्रिस्चियन माओवादी थिए । पोखरामा पृथ्वीनारायणको शालिक भत्काएर क्रिस्चियनले लखन थापाको शालिक राखे । पृथ्वीनारायणप्रति कत्रो प्रतिशोध ! के लखन थापाको शालिक राख्न अर्को ठाउँ पाइँदैन थियो र ? राजसंस्था नहुँदा नेपालको अवस्था कस्तो डरलाग्दो र असुरक्षित हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अहिले सबैले बुझ्न थालेका छन् । त्यसैले अव नचाहिँदो कुरा गरेर नेपाल डुबाउन नेपालका गद्दार नेताहरुको विरुद्ध सशक्त बनौं । अब यो पूण्यभूमि बरवाद गर्ने कामको पछि हामी कोही नलागौं ।
राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा हिमवतखण्डका थुप्रै स–साना हिन्दु राज्यहरु–नुवाकोट, कीर्तिपुर, कान्तिपुर, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर, बाइसे, चौबीसे, पाल्पा, कास्की लगायत ५४ भन्दा बढी हिन्दु राज्यहरुलाई एकीकृत गरेर बनेको उस बेलादेखिको नेपाल हिन्दु अधिराज्य हो ।
विक्रम संवत् १८२५ पछि राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहले क्रिस्चियन धर्म प्रचारक केपुचीन पादरीहरुलाई यहाँबाट लखेटेका थिए । त्यसले गर्दा पनि क्रिस्चियनहरु हिन्दु र नेपालप्रति नकारात्मक बनेका हुन् । नेपाललाई भौडीमा हाल्न अनेकौं तीग्डम गरेर हावामा ंिहडेको देख्दा धिक्कार्न मन लाग्छ । धिक्कार छ– नेपाली भएर नेपाल आमाको कोखमा बन्चरो हान्ने अपराधीहरुलाई ! बितेका ११ वर्षमा यिनै माओवादी, एमाले, कांग्रेस नेताहरूबाट देशको अधोगति भयो भने अब फेरि यिनीहरूबाटै देशले गति पाउँछ भनेर सोच्नु देशका लागि धोका हो ।
नेपालमा संवैधानिक राजतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । ‘सम्वैधानिक राजतन्त्रमा राजा राजनीतिमा असंलग्न रहन्छन् । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै रुपले उनी एकताको प्रतीक बन्न सक्छन् । दुई ठूला छिमेकीहरुका बीच च्यापिएको नेपाल जस्तो जातीय विविधतायुक्त मुलुकका निम्ति संवैधानिक राजतन्त्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ । संवैधानिक राजतन्त्रबाट विश्वसनीयताका साथै निश्चित निरन्तरता प्राप्त हुन्छ । यसले अप्रत्यासित रुपमा हुने राजनीतिक परिवर्तनबाट जोगाउँछ ।’
स्वीट्जरल्याण्डका टोनी हेगन !
नेपाललाई सम्पूर्ण खतराबाट मुक्त गराउन नेपालको राजसंस्था र हिन्दुअधिराज्य नेपालमा सम्पूर्ण एकीकृत जनताका साझा संरक्षकको रुपमा संवैधानिक राजसंस्थालाई युगयुगान्तरसम्म सम्मान गरिनुपर्छ !
अखण्ड नेपालको पहिचान र प्रतिष्ठा बचाऔं ! राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको अपमान गरेर आफ्नो अस्तित्व मेटाउने काम नगरौं । राष्ट्रिय एकता दिवस युगपुरुष पृथ्वीनारायणण शाहको सम्मान गरौं । हामीलाई हिन्दुअधिराज्य सहितको सार्वभौम–नेपाल चाहिएको छ । त्यसको लागि जसरी भए पनि राजसंस्थालाई युगयुगान्तरसम्म टिकाउन राजा ज्ञानेन्द्रलाई राजसिंहासनमा राखेर यो देशलाई बचाऔंं र हामी पनि सबै सुरक्षित बनौंं । (यो लेखकको निजी विचार हो– सम्पादक)
सञ्जालको बधाइ काउन्सिलका अध्यक्षलाई
प्रधानमन्त्रीमा टिक्न ओलीका अनेक टिकडम
कांग्रेसको महाधिवेशन तालिका परिवर्तन
महानगरपालिको नगरसभा बहिष्कार
खोपमा पत्रकारलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने माग
ओलीले पठाए अदालतलाई जबाफ
मुख्यमन्त्रीलाई कांग्रेस प्रवक्ताको सुझाव
तराई - मधेशका मुद्दा उस्तै, मन्त्रीहरुलाई मस्ती
माओवादी छाडेकालाई न्याउरी मारी पछुतो
नेपालको जेठो लोकतान्त्रिक दल घिटी - घिटी
पोखराका वडाध्यक्षहरुले दिए सुझाव
उद्धार र राहतका लागि देउवाको अपील